Ama-Dredges Amabili asebenza ukubuyisa iNational Wildlife Refuge eDelaware
Ama-Ellicott Dredges amabili Asebenzela Ukubuyisa Ukuphephela Kwezilwane Zasendle Kuzwelonke
E-DELAWARE, e-USA - Ama-dredges amabili e-Ellicott 460SL njengamanje asetshenziswa kuphrojekthi enkulu yokubuyisela amanzi olwandle olwandle ePrime Hook National Wildlife Refuge eDelaware. Lona ngomunye wemiklamo emikhulu yokubuyiselwa kwemashi eseMpumalanga ye-US Le phrojekthi izobuyisela esimweni semvelo olwandle olonakaliswe kakhulu olwandle oluthambile olumboza cishe amahektare angama-4,000 (1618.7 ha) ngaphakathi kohlelo lwangaphambili lokuvalelwa kwamanzi angenasawoti esiphephelweni. Lokhu kubuyiselwa kwamaxhaphozi asogwini kuthuthukisa ikhono lamaxhaphozi okuphephela ukumelana neziphepho zesikhathi esizayo nokukhuphuka kogu lolwandle futhi kuthuthukisa indawo yokuhlala yezinyoni ezifudukayo nezinye izilwane zasendle.
Enye yezinhlaka ezimbili ze-Ellicott 460SL isebenza
I-AMEC ne-subcontractor yasolwandle, iDredge America, ibe nempumelelo enkulu selokhu kwaqala umsebenzi wokubuyiselwa Juni. I-dredge ngayinye isebenza ngamahora ayi-10 ngosuku, izinsuku eziyisithupha ngesonto. "Sijabule ngama-dredges futhi siyakwazisa ukuxhaswa kuka-Ellicott hhayi ngale phrojekthi kuphela kepha ngayo yonke imisebenzi kaDredge America e-US", kusho uSam Robinson, oyiProject Engineer yeDredge America.
Sebevele bakhiphe ngaphezulu kwe 1.5 amamayela (i-2.4 km) yeziteshi zamanzi futhi ahlela ukukhipha amamitha ayi-30 isiyonke amamayela (48.3 km) wesiteshi ngehlobo elizayo.
I-Dredge America's Jason Collene eceleni kwe-Ellicott 460SL dredge
Isigaba sokuqala sephrojekthi sizogxila kakhulu ekudontsheni umashi nasekuthuthukiseni ukuhamba kwegazi. Bazoqala ukumpompa isihlabathi ogwini lolwandle ukuvala izikhala bese benza isitebele semashi esibuyela emuva. Ukweqiwa kwe-phragmites, uhlobo oluhlaselayo lohlaza obusika, kubangele ukuncishiswa kwendawo emanzi. Ukusungula ukugeleza kwamanzi anosawoti njalo kuzosiza ukuqeda ama-phragmites. Lokhu kubuyiselwa kokujikeleza kwendawo kanye nokugeleza kwamanzi kwemvelo kuzokwenza ukuthi izimila zikasawoti zibambe kahle futhi zande, kuthuthukise ukuqina kwamachibi okuphephela ngokumelana nezivunguvungu zesikhathi esizayo kanye nokunyuka kwezinga lolwandle, nokunikeza indawo ebalulekile yezinyoni nezinye izilwane zasendle.
Prime Hook National Refuge Refuge
Ungabuka ama-dredges ayasebenza esiteshini sika-Ellicott se-YouTube. IPrime Hook National Wildlife Refuge nayo ithumela izibuyekezo kuzo ikhasi Facebook, ngakho-ke hlola lokho!
Imininingwane - I-460SL Swinging Dragon Dredge
Ububanzi Bokukhipha: 10 ″ (245 mm)
UMax. Ukumba Okujulile: I-20 ′ (6.1 m)
Amandla Ephelele: I-440 HP (330 kW)
Amandla wePump: I-320 HP (240 kW)
Amandla wokusika: I-40 HP (30 kW)